नेकपाका स्थानीय नेताको बाबुआमालाई दोहोरो वृद्धभत्ता - Purbeli News
नेकपाका स्थानीय नेताको बाबुआमालाई दोहोरो वृद्धभत्ता
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ २८, २०७५ समय: २०:४८:२७
उर्लाबारी । ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारले सम्मान स्वरुप प्रदान गरेको वृद्ध भत्तामा समेत नेकपाका स्थानीय नेताहरूले ¥याल चुहाएको पाईएको छ । मोरङको उर्लाबारी–४ का नरपति भट्टराई उनकी पत्नी पवित्रा देवी भट्टराईले सत्तारुढ दलको सेटिङमा दुई वटा पालिकाबाट वृद्धभत्ता लिइरहेको भेटिएको हो । भट्टराई दम्पतिका छोरा चन्द्र भट्टराई गत स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालिन नेकपा एमालेको तर्फबाट उर्लाबारी नगरपालिकाको वडा नं. ५ मा वडाध्यक्षका उम्मेद्वार थिए ।
आर्थिक रुपमा सम्पन्न भए पनि भट्टराई दम्पतिले उर्लाबारीको वडा नं. ४ बाट २०७१ साल देखि नयाँ फारम भरेर भत्ता लिइरहेको पाइएको छ । यसअघि उनीहरूले साविक टाँडी गाविसको वार्ड नं. ८ बाट २०६९ साल देखि वृद्ध भत्ता लिँदै आएको रेकर्ड फेला परेको छ । टाँडी–८ राज्य पुनर्संरचना पछि मिक्लाजुङ ३ भएको छ । गाउँपालिकबाट हाल सम्म भट्टराई दम्पतिले बसाई सराई लिएका छैनन् । बसाई सराई नलिए सम्म वृद्ध भत्ताको सूचीबाट उनीहरूको नाम हटाउन नमिल्ने ब्यवस्था छ । तर, बसाई सराई विना नै उर्लाबारीको साविक वडा नं. १ बाट भट्टराई दम्पतिको फारम कसरी भरियो ? वडाका कर्मचारी र वडाध्यक्ष नै बेखवर छन् ।
भट्टराई दम्पतिलाई दोहोरो भत्ता दिलाउन तत्कालिन गाविस कर्मचारी तेजनाथ घिमिरेको मुख्य हात रहेको जानकारहरू बताउँछन् । भट्टराई दम्पति हाल उर्लाबारी–४ का मतदाता	हुन् । नेकपाका केही नेताहरूको मिलेमतो र सेटिङमा भट्टराई दम्पतिले दुई स्थानबाट वृद्धभत्ता बुझेको भट्टराई दम्पतिलाई नजिकबाट चिन्नेहरू बताउँछन् ।
मिक्लाजुङ गाउँपालिका वार्ड नं. ३ का वडाध्यक्ष खगेन्द्र मादेनले भने बसाई सराई नलगेसम्म लगत काट्न नमिल्ने बताए ।’उर्लाबारीबाट पनि सामाजिक सुरक्षा वृद्ध भत्ता) लिएको जानकारी मलाई नै थिएन् । वृद्ध–वृद्धाले गलत नियत राखेर सरकारी रकम लिन्छन् भन्ने मैले कल्पना पनि गरेको थिइन ।’उनले दुई स्थानबाट भत्ता लिएको प्रमाण पुगे एकातिरको रकम फिर्ता हुने बताए । यता उर्लाबारी–४ का वडाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण धिमालले भट्टराई दम्पतिले दोहोरो वृद्धभत्ता लिएको आफूलाई जानकारी भएको बताए । उनले यथार्थ बुझेर कानूनी उपचार खोज्ने बताएका छन ।